Warkii Hore War Soo Dhaaf: Qofna Ma Codsan Karo Iskuulkaan Hadii Aanan Reerka Daqligooda Ka Hoosayn £1,500 Sanadkii | shumis.net
Home » News » Warkii Hore War Soo Dhaaf: Qofna Ma Codsan Karo Iskuulkaan Hadii Aanan Reerka Daqligooda Ka Hoosayn £1,500 Sanadkii
Iskuulka VidyaGyan ayaa loogu tala galay inuu siiyo waxbarasho sare reeraha saboolka ee degan tuulooyinka
Waxaa dhigan karta 200 oo arday sanad walba – laakiin waxaa aad u badatay waalidiinta oo doonaya in ilmahooda ay helaan nolol fiican, sidaas darteed waxaa yimaada 250,000 oo codsi.
Iskuulka oo ay aasaastay Shiv Nadar Foundation, ayaa ah iskuul lacag la’aan, wuxuuna bixiyaa waxbarasho la mid ah mida ay bixiyaan iskuulaadka ay dhigtaan dadka lacagta leh.
Roshni Nadar Malhotra ayaa doonaysa in iskuulka uu soo saaro dad cusub oo hogaaiya Hindiya
“Inta badan dadka ku nool tuulooyinka, waxaa jira dad badan oo dalka Hindiya oo aan la ogayn waxtarkooda. Ma haystaan jaamacado fiican” ayay sheegtay Ms Malhotra, oo madax ka ah shirkadda HCL ee teknoolajiyada.
Performer from Uttar Pradesh
Qof ka qayb qaadanaya bandhig faneed gobolka Uttar Pradesh oo is diyaarinaya
“Waxaan doonaynay inaan aragno inaan leenahay hab iskuul qoris oo ah mid aad u fiican.”
Iskuulka ayaa loogu tala galay in lagu caawiyo ardayda aqliga badan ee saboolka ah ee ka yimid Uttar Pradesh
Ilaa hadda iskuulka waxaa ku baxday £59 milyan – Ms Malhotra ayaa sheegtay in ay jireen su’aalo in lacagta lagu qarash garayn karay dad badan oo la baro sida wax loo qoro.
Iskuulka ayaa loogu tala galay inay ardayda ku helaan jaamacadaha ugu horeeya
Waxayna sheegtay faa’iidada ay ka helayso tuulada ardaydan markii ay dhalinyaradooda ay aadaan jaamacadda ugu saraysa ee Hindiya ama Yurub ama Maraykanka.
“Markii ardayda ay helaan jaamacad fiican, waxay kor u qaadaysaa niyada tuulada. Ardaydan ayaa noqonaya rajo fiican.”
“Waxaa looga dan leeyahay sidii ay shaqo u qaban lahaayeen oo ay u heli lahaayeen sida loo xaliyo dhibka” ayay sheegtay Ms Malhotra.
“Ma aha oo kaliya inaad iskuulka heshid, waxay u baahan yihiin inay badbaadaan markii la dhexgaliyo arday aad u tartamaysa oo adduunka oo dhan ka timid.”
Waxay qaadan doontaa waqti in la arko inay noqdaan hogaamiyayaasha mustaqbalka ee Hindiya, ayay sheegtay. “Laakiin way ku socdaan.”
Title: Warkii Hore War Soo Dhaaf: Qofna Ma Codsan Karo Iskuulkaan Hadii Aanan Reerka Daqligooda Ka Hoosayn £1,500 Sanadkii